Ramadan 2020 Burma Calendar Timings ~ Ramadan Calendar 2020
Ramadan 2020 Burma Calendar Timings
Whenever people think about celebrating any holy month then there is no better way than Ramadan, it is the only time of the year that gives usachance to wipe out the badness in ourselves and think about others. If you areaMuslim and live in the country of Burma then you should be looking for the Ramadan Calendar 2020 for Burma with complete details.
The country of Burma is huge and there are many different religions lives also, the exact population of Muslims is 4% and in coming years will increase. Both Sunnis and Shias can perform this Sunnat in their own way. With that said below, you will find out the complete online calendar for upcoming Ramadan.
Here is the list of ten major cities of Burma with the exact Muslim population in numbers:
When is Ramadan 2020 in Burma
Ramadan 20208 in Burma will begin on Friday, April 24, 2018 , and will end on the day of Sunday, May 24, 2020 .
Ramadan Decorations Burma
you can follow this online calendar timetable below for whole 30 days.
Suhoor And Iftar Timings Burma 2020
Below is The Ramadan 2020 Calendar Burma.
Also, the below calendar contains Suhoor and Iftar Timings Burma.
Ramadan Calendar Burundi
Ramadan Calender Burkina
Ramadan Calender Bulgaria
ဥပုသ်လ 2020 မြန်မာနိုင်ငံ။ ဒါကြောင့်ဥပုသ်လ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဥပုသ်လကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအားလုံးအလွန်အရေးကြီးသောမွတ်စလင်ညီအစ်ကို, ညီအစ်မများအတွက်တစ်လဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ Non-မွတ်စ်လင်များအတွက်ရုံတစ်လပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်မွတ်စ်လင်များအတွက်အရေးကြီးသောနှင့်တစ်လများထဲတွင် Be နိုင်ပါစေ။
သင်တို့တွင်အအတော်များများဿွာန်လ၏သမိုင်းကိုသိပါ့ပေမယ့်တိုင်, သမိုင်းလတွေထဲမှာဒီအကြောင်းမသိသောသူအများသောညီရှိပါတယ်။ နှင့်ဤကမ္ဘာ၏လူအပေါငျးတို့နှင့်အတူအစ္စလာမ်ဘာသာဝေမျှဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဿွာန်အစ္စလာမ့်ပြက္ခဒိန်၏9ကြိမ်မြောက်တစ်လဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းစာသားအာရဗီလောင်သောဿွာန်ကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာမကြာခဏပါဝါ၏ည "အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော Laylat al-Qadr အဖြစ်လူသိများအခါသမယတွင် 610 စီအီးအတွက်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်မှထင်ရှားကုရ်အာန်တစ်ခုခုပြီးနောက်မွတ်စ်လင်များအတွက်သန့်ရှင်းသောဘုရားလအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ရာတစ်ခုခုကို။
"ဥပုသ်လ၏တစ်လတစ်ခုခုကုရ်အာန်, လူများအဘို့အလမ်းညွှန်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုနှင့်စံ၏ရှင်းလင်းသောသက်သေထင်ရှားသည့်အတွက် [သောကွောငျ့ဖွစျသညျ] ။ ဒါကြောင့်အကြင်သူသည်မြင်ကွင်းများလ [၏လဆန်း] သူ့ကိုကြောင့်အစာရှောငျကွပါစသော ထို့နောက်အခြားအရက်ပတ်လုံးတစ်ခုတူညီသောအခွင့်အရေး Equal အရေအတွက်က - နှင့်အကြင်သူသည်လုံခြုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်သင်ကာလပြီးမြောက်ရန်နှင့်အဘို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်အဘို့အသင်ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် [နှောင်ကြိုး] များအတွက်ရည်ရွယ်မထားဘူးအဘို့အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သူကိုသင်ပဲ့ထိန်းနေခဲ့ဖူးနှင့်ဖြစ်ကောင်း, သင်သည်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်သည့် [မှ] ရည်ရွယ်ပါသည်။ "
သငျသညျအစာရှောင်ခြင်း၏ကောင်းပြီသိပေမယ့်ငါ့ကိုကစိုးရိမ်ကြောင်းအဘို့ထိုသို့ပြုသူများသည်ဆွေးနွေးရန်ကြကုန်အံ့။ Dawn မှနေဝင်ချိန်ကနေအစာရှောင်မွတ်စလင်။ ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိ Dawn နှင့်နေဝင်ချိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကိုရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်အစာရှောင်ခြင်း၏ကြာချိန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာ 15 နာရီကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ 21 နာရီရန်။
သငျသညျဿွာန်အစာရှောင်ခြင်းတစ်လ၏ကျောရိုးဆိုနိုငျသညျ။ အစာရှောင်ခြင်းပဲနေဝင်ချိန်မှအရုဏ်ကနေဟန်ဂေရီဆက်လက်မဆိုလိုပါဒါပေမဲ့သင်တစ်နေ့တာအပေါငျးတို့သယေဘုယျဒီရေမှဝင်ကြပြီကြဘူး။ သင်ကဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူးသေချာတာပေါ့ဖြစ်စေလျက်, ကွာလိင်နှင့်အခြားမကောင်းတဲ့အမှုအရာထဲကနေနေဖို့, ကြမ်းတမ်းဘာသာစကားမသုံးပါနဲ့, မုသာမပြောကြဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ပါးစပ်, ears က, လက်ကမ်းခြင်း, မျက်စိအစာရှောင်စောင့်ရှောက်ဖို့ပါ။
Sahar မှာစားရ Suhoor, ဿွာန်၏တစ်ချိန်ချိန်အရှိဆုံးအရေးပါမုန့်ညက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဤအံ့ဖွယ်ရာသီနှင့်၎င်း၏သမားရိုးကျအလေ့အကျင့်များအတွက်အတူတကွထားသကဲ့သို့အသင်တို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်မမေ့မလြော့ပါစေခြင်းငှါအရှိဆုံးသိသိသာသာ Matters တပါး Musaharati ၏နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေရိုးရာဓလေ့ - ထိုနှင့်အတူ Suhour ၏နည်းလမ်းခါနီးသောသူ မိမိအစည်၏အနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်။
ကျနော်တို့ suhoor ကိုခေါ်စားအရုဏ်သောအစားအစာ။ Suhoor sunnah ဖြစ်ပါတယ်။ suhoor ခုနှစ်, သငျသညျလုံ့လရှိသူများနှင့်ကျန်းမာရေးသောအစားအစာကိုစားရန်လိုအပ်သည်။ စပ်အစာစားရှောင်ကြဉ်ပါ။ တဖန်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှရေသောက်ရန်ကြိုးစားပါ။
စားနှင့်သင် suhoor အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အစားအစာများကိုပိုမိုအကြံပေးချက်များ။
Iftar အားလုံးစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်သောအရာပါ! အထူးသဖြင့်သားသမီးရဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာထိုသို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ Iftar ခုနှစ်တွင်တိုင်းမိသားစုကောင်းနှင့်စပ်အစားအစာများကိုမှန်ကန်စေသည်။ သို့သော်ဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးသောအရာလည်းအခြားသူများဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောမဟုတ်အစားအစာ clipping နိုင်ပါတယ်သူများသည်နှင့်အတူမျှဝေဖို့ကြိုးစားပါ။
ဿွာန်၏အဓိကအရာလပုအခြားသူများဂရုစိုက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွမွတ်စ်လင်များအတွက် mughfirat များအတွက် Dua စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင့ဿွာန်လအပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမနက်စောစော-ul-Fitr ၏ပျော်ရွှင်မှုပေးထားတယျ။ သငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျအဆင့်ရနိုင်ပြီးသင်တန်း၏ဤတစ် သာ. ကွီးမွတျအဆင့်ဥယျာဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းကြောင်းဒါ။